Uthelekiso a nkqo ekukhuseleni ilungelo Lawyer a Prosecutor - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Japan kwi-intanethi. Oyena isemthethweni portal ka-Uponese abaqondisi-mthetho.
Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Japan kwi-intanethi. Oyena isemthethweni portal ka-Uponese abaqondisi-mthetho.
Uthelekiso a nkqo ekukhuseleni ilungelo Lawyer a Prosecutor
Nabani na olilungu kokuqwalasela a career kwi-mthetho ubani inani nemigaqo yokusebenzisa imichiza ukwenza i - apho ukuthatha bar, yintoni indawo umthetho specialize kwaye nokuba ngaba umsebenzi njengokuba urhulumente lawyer okanye kwi private senzoEtyaleni abaqondisi-mthetho, uninzi kwalomgaqo-siseko isigqibo ngu apho icala courtroom nisolko izakuba ehleli njalo.
Zombini abatshutshisi kunye nkqo ekukhuseleni ilungelo abaqondisi-mthetho ingaba eyona nto abadlali kwi-yovavanyo kwi-mthetho amatyala.
Njengoko prosecutor ezama ukubonisa ukuba defendant unetyala, nangona kunjalo, nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer izama kuvavanya yakhe innocence. A prosecutor linoxanduva elitshutshisayo umntu olilungu ibe igcwalisiwe nge ulwaphulo-mthetho.
Ngamazwi alula, yena linoxanduva ukuhlanganiswa ubungqina malunga ulwaphulo-mthetho, igqiba nokuba kukho ngokwaneleyo ubungqina ukuba kuvavanya kunjalo, ngoko ke persuading i-jury ukuba defendant unetyala kwi isiseko ukuba ubungqina.
Zolwaphulo mthetho nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer ingaba kanye opposite. Yena investigates kunjalo egameni defendant, advises i-defendant kwi njani ndibongoze kwaye, ukuba kuyimfuneko, umele defendant e yovavanyo kunye imboniselo ukufumana kwakhe acquitted. Lowo umele i-ofisi zezithili zemfundo ziya kunika kwangethuba lamagqwetha, onyulelwe ukuba igosa ngubani eliphetheyo, ulwaphulo-mthetho utshutshiso ngaphakathi kolawulo lwesixeko kwaye ufumana inkxaso-mali yi-imali yoluntu. Federal abatshutshisi baqeshwa lisebe Lobulungisa A nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer, kwesinye isandla, ibe private lawyer okanye uluntu lawyer. Ngokubanzi, inkundla iza atyumbe umntu uluntu defender ukuba suspect ayikwazi ahlawule imirhumo wabucala lamagqwetha.
Eyona nto similarity phakathi nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer kwaye prosecutor yindlela kokuba ifumene waqala kwi-isemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke.
Zonke abaqondisi-mthetho kufuneka uzalise emine-unyaka undergraduate lwenkqubo yalandelwa iminyaka emithathu umthetho esikolweni ukuze ufumane Juris Doctor enomsila. Emva nkqubo ithatha ilizwe ilibeke kufutshane, a lawyer kufuneka okokuba bar nakwiimviwo ukufumana ungeniswe urhulumente bar. Kungakhathaliseki apho nihlale kwi-courtroom, uza kuba igqityiwe ubuncinane isixhenxe idlulileyo isigxina nzulu phambi kwenu ukuba iphepha-mvume ukuba senzo umthetho. I-median aqhuba kuba bonke abaqondisi-mthetho waba dollazi, ngonyaka ngo Expressing a umvuzo njengokuba median kuthetha ukuba nesiqingatha abaqondisi-mthetho kuba i-ingeniso ngasentla ukuba isixa-mali, nesiqingatha kuba umvuzo ngezantsi ukuba isixa-mali. Kawonke-wonke, ulwaphulo-mthetho abaqondisi-mthetho bakholisa ukuba kuhlawulwa i-lower umvuzo kwe-private abaqondisi-mthetho ukusukela baya ukuba inkxaso-mali yi-government. Nangona kunjalo, precise isixa-mali baye earn kuxhomekeke zabo umsebenzi owenzayo kwaye namava. Nanku breakdown ka-imivuzo kuba nkqo ekukhuseleni ilungelo abaqondisi-mthetho kwaye abatshutshisi e ezahlukeneyo stages zabo careers: A prosecutor kusebenza kuphela kwi-mthetho amatyala. A nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer ingaba khetho ekuqhutywa kwi-mthetho okanye iimeko zasekuhlaleni kwi-rare iimeko, yena babe amele abaxhasi kuzo zombini arenas. Ngokubanzi, zasekuhlaleni inyathelo kuqala xa plaintiff iifayile uxwebhu lwezikhalazo ngaphakathi enkundleni ngokuchasene defendant. I-plaintiff iqhele uzama ukubonisa ukuba defendant yaye kukho into engalunganga ezifana olwaphulo, uze uphumelele ibhaso olukhawulezileyo lwemali umonakalo othe njengoko imbuyekezo. Ngu zasekuhlaleni nkqo ekukhuseleni ilungelo lamagqwetha ke umsebenzi amele a defendant kwiindawo zasekuhlaleni litigation ngalo lonke iqonga le meko. Ngokungafaniyo ne-a-mthetho kunjalo, nangona kunjalo, defendant kufuneka hire eyiyeyakhe zasekuhlaleni nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer.
Urhulumente uza na inyathelo kwi ukuba defendant ayikwazi afford ukuya enkundleni.
Jayne Thompson earned i-LLB kwi-Mthetho kwaye Ishishini imisebenzi Yolawulo karhulumente ukususela Ngezifundo ka-Birmingham kwaye i-LLM kwi-wamazwe Ngamazwe kwi-Ngezifundo ka East London. Yena practiced ezahlukeneyo"big umthetho"firms phambi yazisa i career njengoko kushishino umbhali.
Njani Ukwenza Ibango kwi-Inkundla
Татан буулгах хуулийн этгээдийн захиалга
© 2021 Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Japan kwi-intanethi. Oyena isemthethweni portal ka-Uponese abaqondisi-mthetho.